Suxufiyiin Xabsiga Ku Booqday C/fataax Jaamac Mire (Sheeko Ku Saabsan Dareenkiisa Xabsiga!) | raascasayrmedia.com
← Tacsi:dhamaan jaaliyada beesha siwaaqroon ee dalka masar waxa ay tacsi u dirayaan ehelkii uu ka geeriyooday qoraa salah hashi arab
Taariikhda Eng Saalax Xaashi Carab oo Ku Geeriyooday Wadanka Djibouti →
August 21, 2010 · 11:28 pm
Suxufiyiin Xabsiga Ku Booqday C/fataax Jaamac Mire (Sheeko Ku Saabsan Dareenkiisa Xabsiga!)
Koox suxufiyiin oo isugu jira kuwa gudaha iyo kuwo caalami ah ayaa markii ugu hooreysay maanta oo Jimce ah [20-08-2010] booqasho soo eegid ah ugu tagay C/fataax Jaamac Mire oo ku xiran xabsiga dhexe ee Boosaaso.
Booqashadan oo ahayd mid kooban ayaa suxufiyiintan ku go’aansadeen inay dareenkooda kula qeybsadaan saaxiibkood C/fataax Jaamac Mire oo ahaa agaasimihii idaacada madaxa bannaan ee Horseed Media, kaasi oo Sabtidii 14-08-2010 maxkamada Boosaaso ku riday xukun 6 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $500.
Xukunka ay gaartay maxkamada oo ahaa mid deg deg ah ayaa wuxuu ka dambeeyey markii idaacada Horseed Media ay wareysatay Sheekh Maxamed Siciid Ata moo dagaal kula jira ciidamada Puntland, wareysigaaasi oo baxay 13-08-2010 ayaa maamulka Puntland ku tilmaamay buunbuunin mucaaradka ka soo horjeeda.
Gelidii Xabsiga dhexe
Sida caadiyan ah dhaqanka xabsiga, gaarigii aan wadanay waxaan nalooga reebay meel qiyaastii 100 talaabo (feet) u jirta xabsiga halkaasi oo aan ka soo lugeynay. Markii aan soo gaarnay iridka ugu horeeya waxaa nala mariyey baaritaan iyadoo sidoo la baaray cabitaan aanu u sidnay saaxiibkeen C/fataax.
Iridka labaad ee xabsiga ayaa sidoo kale baaritaan kale nalagu marsiiyey. Askarigii joogay wuxuu nagu yiri “iska reeba telefoonada gacanta iyo wixii qalab kale ee aad wadataan anaguna waan yeelnay”. Waxay naga qoreen magacyadeena.
Su’aalo dhowr ah oo ay askartu na weydiisay waxaa ka mid ahaa ‘xageed u socotaan iyo yaad dooneysaan?”. Anaguna waxaan u sheegnay inaanu booqasho ugu socono wariye C/fataax Jaamac Mire. Wayna noo siidaayeen.
Cabitaankii aanu sii qaadnay ma suuragalin inaan gacanteena ugu dhiibno wariyaha, hase yeeshee waxay saraakiisha xabsiga noogu cudurdaareen in amaanka dartiis iyaga u geyn doonaan.
Labo jaranjaro ayaan fuulnay dhisme qeybtiisa sare weli qabyo tahay intiisa badana dhinac laga cadeeyey, waxaana marka aad gasho muuqaalka ugu horeeya ee aad indhaha ku dhufaneyso uu yahay cunto halowday, lafo timireed iyo caagado biyo laga cabay oo dhex daadsan qeybta sare ee dhismaha. Qoka ugu soo horeeya waa uu marnaa. Askari na wehliyey ayaa noo sheegay in qeybtan cusub tahay oo weli cidna lagu soo xirin.
Waxaan iridka ka staagnay qol aan ku qiyaasay 8-mitir. Iridka waxaa kaga go’an albaab Biro xadiid ka sameysan oo shabaq ah. “AAWAY WARIYIHII?” waxaa sidaa ku dhawaaqay askarigii nala socday.
Waxaa soo booday C/FATAAX JAAMAC MIRE oo meel gees ah fadhiyey. Sida naloo sheegay qolkan waxaa la yiraahdaa 77 (waa magac ay u bixiyeen koox maxaabiis ah oo ku xiran qolkan C/fataax-na ka mid yahay).
Sheekadii na dhexmartay C/fataax
Runtii anugu waxaan ahaa nin aqoon dheer u leh C/fataax. Markii aan wajigiisa arkay muuqaal xun kumaan arag, waxaase ka muuqatay inuu dhibsaday xoriyad darrada ku heysata meesha iyo sida ay toddobaadka uu ku jiray ula mid noqotay sanado nin xirnaa.
Markii ugu horeysay ee C/fataax isbaranay waxay ahayd sanadkii 2000 markaasi oo uu tababar telefishanka ku soo qaatay TV-ga Djibouti ee RTD, wuxuu kaloo iiga sheekeeyey safar uu ku tegey dalka Ruushka oo seminar waxbarasho ku soo qaatay.
C/fataax Wuxuu nooga sheekeeyey waxyaabihii uu soo maray mudadii usbuuca ahayd ee uu ku jiray xabsiga. Waxay ahayd subaxdii Isniita 16-08-2010 markii loo soo wareejiyey xabsiga dhexe, wixii waqtigaas ka horeeyey wuxuu ku xirnaa saldhiga dhexe ee booliska.
Illaa haatan ma jirto cadeyn ama daliil kale oo dowlada iyo hay’adaha garsoorku ugu qiil sameeyeen xariga C/fataax oo aan ka ahayn inuu soo bandhigay aragti ka duwan tan dowlada. Waxaase jirta hadalo is burinaya oo marar kala duwan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta C/xakiin Guuleed iyo ku xigeenkiisa. Hadaladaasi oo ay ka sheegeen wareysiyo ay siiyeen labadooda idaacadaha VOA iyo BBC.
Hay’ado Xuquuqul Insaan oo Booqday C/fataax
Sida uu noo sheegay C/fataax, maalin ka dib markii la geeyey xabsiga dhexe oo ku beegan Talaadadii waxaa xabsiga ugu tegey saraakiil ka socotay hay’ado xuquuqul insaan kala duwan, saraakiishan waxay isugu jireen kuwo dalka joogay iyo kuwo dhowaan dibada ka yimid.
Ujeedada socdaalkooda ayaa ahaa inay u kuurgalaan xaalada wariyaha u xiran dowlada Puntland, waxayna wareysi kula yeesheen qol ka mid ah kuwa dibada ku yaalla ee xabsiga.
Su’aalo dhowr ah oo u badan caafimaadkiisa, sida loola dhaqmay iyo sida dareenkiisu yahay ayuu C/fataax uga warbixiyey saraakiisha hay’adaha xuquuqul insaanka ee ugu tegey xabsiga dhexe. Waxayna u sheegeen in xogtan ay u gudbin doonaan hay’adaha adduunka ee qaabilsan xuquuqda aadanaha sida Amnetsty International, Human Rights Watch iyo Africa Human Rights.
Sidee loola dhaqmay C/fataax?
Wuxuu noo sheegay saaxiibkeen in si wanaagsan ula macaamileen saraakiisha gacanta ku heysa xabsiga dhexe ayna u qadariyeen si ka duwan dhamaan maxaabiista meesha ku xiran. Wuxuuse noo sheegay in habeenkii ugu horeeyey ee la geeyey saldhiga booliska xilli habeen bar lagu bilaabay su’aalo si OB-ga looga buuxiyo. Markii mid ka mid ah su’aalihii oo ahayd inuu DEMBI QIRTO !uu diidayna la dharbaaxay, loona cago jugleeyey. Taasoo uu sheegay in cabsi ku abuurtay C/fataax.
Jawiga xabsiga iyo nolosha
C/fataax, sidaan soo sheegay waxaa uu ku jiraa qol loogu magac daray [Qolka 77], waxaa halkaa kula xiran rag aan ku qiyaasay 50 una badan dad wax soo dilay iyo rag kufsi lagu soo xukumay, qaarkood waxaaba ku jira askar hore oo intay dembiyo galeen la soo xukumay. Taasina waxay ahayd arin ka mid ah kuwa ka yaabiyey C/fataax Jaamac.
Qolku ma leh marwaxad, daaqadana looguma talagalin. Jawiga Boosaaso waa kuleyl (derejada heerkulka waxay gaartaa 50). C/fataax wuxuu noo sheegay in hurdada uu dhibaato ku qabo buuq badan oo ka jira qolka dhexdiisa darteed maadaama dadka la xiran ay yihiin dad kala duwan. Waxaa intaa dheer in Nalka qolka habeenkii oo dhan shidan yahay (lamana demiyo). Dabcan ninkii hurda raba carqalad ku noqon kara.
Musqusha biyo way leedahay waase kuleyl, sidaa awgeed maxaabiista ayaa caagado yar yar ku sii shubta biyaha si ay ugu qaboobaan si ruuxii qubeys, weyso ama dan kale leh u isticmaalo.
C/fataax wuu soomanaa markaanu u tegnay, intii uu xirnaana sidaasuu ahaa oo maalina kama tegin soonkiisa maadaama hadda lagu jiro bisha Ramadan.
Wuxuu noo sheegay inuu go’aansaday inuu soonka dhaafin inta uu xira yahay. Wuxuu kaloo noo sheegay in hal kutub Quraan yaallo qolka kaasna uu akhristo xilliyada ay seexdaan maxaabiista kale ee la xiran.
Taliyaha xabsiga oo ah nin furfuran ayaa markii loo sheegay in wariyaal soo booqdeen C/fataax si gaar ah noola hadlay. Wuxuu noo muujiyey debecsanaan. Anaguna waxaanu ku boorinay in C/fataax si wanaagsan loola dhaqmo, wuuna naga aqbalay.
Cuntada oo aan ka wareysanay wuxuu noo sheegay in bariis iyo timir afurkii loo keeno oo xabsiga lagu sameeyo, laakiin C/fataax kuwaasi iskuma uu haleeyo ee waxaa si toos ah cuntada looga qaadaa magaalada ayna u geeyaan ehelkiisa sida afurka iyo saxuurta oo mar qura loo wada geeyo.
Sida kale dareenkiisu wuxuu ahaa mid degan, wuxuuna iila muuqday nin ku faraxsan booqashadeena maadaama aanu ahayn kooxdii ugu horeysay ee ku booqata xabsiga tan iyo intii la xiray.
Xuquuqda Qoraalka Waxaa iska leh raxanreeb.com
One response to “Suxufiyiin Xabsiga Ku Booqday C/fataax Jaamac Mire (Sheeko Ku Saabsan Dareenkiisa Xabsiga!)”
hala soo daayo ninka siwaaqroon oo laku heesto kardarada